Semalt: WebSundew वेब स्क्र्यापि Software सफ्टवेयर। एक नजरमा सुविधाहरू र प्रणाली आवश्यकताहरू
वेब स्क्र्यापिंगमा वेबसाईटहरूबाट डाटा स collecting्कलन गर्ने र प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार यसलाई स्क्र्याप गर्ने काम समावेश छ। यो क्षेत्र निरन्तर विकास भइरहेको छ, र त्यसैले नयाँ सफ्टवेयरको उदय हुँदैछ। वेब स्क्र्यापि now अब विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट उपयोगी जानकारी निकाल्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र सजिलो तरीका भएको छ। WebSundew एक शक्तिशाली र व्यापक वेब स्क्रैप आईएन उपकरण हो कि उच्च गति र उत्पादकता संग डाटा निकाल्न मद्दत गर्दछ। WebSundew को साथ, तपाईं सजिलैसँग डाटाको ठूलो मात्रा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अपेक्षित ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
WebSundew - व्यवसाय र उद्यमहरूको लागि उपयुक्त:
WebSundew व्यवसाय (ecommerce, अनलाइन रिटेलरहरू, घर जग्गा एजेन्सीहरू, IT विभागहरू) र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ। तपाईले चाहेको डाटा सजिलैसँग लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, JSON वा CSV ढाँचामा फसल र भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। WebSundew चार फरक संस्करणहरूमा आउँदछ: लाइट, प्रोफेशनल, इन्टरप्राइज, र मानक।
तपाईको आवश्यक्ता र अपेक्षाहरू अनुसार संस्करण छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, लाइट संस्करण स्टार्टअप र फ्रीलांसरहरु को लागी उपयुक्त छ, र व्यावसायिक संस्करण ठूलो आकारको व्यवसायहरु को लागी महान छ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष WebSundew एक्सेल फाइलहरु लाई आवश्यक डाटा आयात र छवि र पाठ कागजात दुबै को स्क्रैप छ।
WebSundew - एक उत्पादक र अद्भुत सेवा:
यदि तपाईं उच्च श्रम उत्पादकतालाई मूल्यवान गर्नुहुन्छ र कसरी पैसा गणना गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ, तपाईं वेबसन्डु बिना केही गर्न सक्नुहुन्न। यो एक अत्यधिक उत्पादक र राम्रो सेवा छ, जसले डाटा प्रतिलिपि गर्दछ र टाँस्दछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार यसलाई स्क्र्याप गर्दछ। तपाईं दुबै डाईनामिक र आधारभूत वेबसाइटहरूबाट जानकारी स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ, गुणवत्तामा सम्झौता नगरी।
यसको प्रभावकारिताको मूल्या To्कन गर्न, तपाईले वेबसन्ड्यु डाउनलोड र स्थापना गर्नु पर्छ। यो वेब स्क्र्यापरको साथ, तपाईं मेटा वर्णन, मेटा शीर्षक, र एक साइटको कुञ्जी शब्द आँखा झिम्काउन लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
WebSundew स्क्रिप्ट बिना कुनै पनि वेब सामग्री ह्यान्डल गर्दछ:
WebSundew एक मात्र उपकरण हो कि स्क्रिप्ट बिना वेब सामग्री ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यो उपकरण गैर प्रोग्रामरहरू र गैर कोडरहरूको लागि महान हो, र तपाईंलाई यसबाट फाइदा लिन कुनै प्रोग्रामिंग सीपहरू आवश्यक पर्दैन। यसको सट्टामा, WebSundew तपाइँलाई टेम्प्लेट सिर्जनाको माध्यमबाट बिना कुनै स्ट्रिंग कोडको मार्गदर्शन गर्दछ र HTML कागजात सजीलै निकाल्दछ। परिणामहरू CSV, XML र स्प्रेडशीट ढाँचामा बचत गरियो। वित्त र बैंकिंग विभागहरू, रियल ईस्टेट एजेन्सीहरू र रिटेल जस्ता कम्पनीहरूले यस डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणबाट लाभ लिन सक्दछन्।
वेबसन्ड्यु प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईसँग निम्न प्रणालीहरू मध्ये कुनै हुनुपर्छ।
१. अपरेटिंग सिस्टम आवश्यकताहरू: विन्डोज / / भिस्टा / XP / २०००
२ र्याम: 12१२ MB
Process. प्रोसेसर (CPU): एथलॉन १००० मेगाहर्ट्ज वा पेन्टियम III
WebSundew प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस:
WebSundew यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेसको लागि राम्रोसँग परिचित छ जुन तपाइँलाई तपाइँको प्रणालीमा गुणवत्ता छविहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। यसले सजीलै वेब २.० वेबसाइटहरू प्रक्रिया गर्न सक्छ र स्थानीय HTML स्रोतहरूबाट जानकारी निकाल्न सक्छ। यसको नि: शुल्क संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र वेबसन्ड्युलाई १ days दिनको लागि यसको गुणवत्ताको बारे निश्चित हुन प्रयास गर्नुहोस्। परीक्षण अवधिको समयावधि सकिएपछि, तपाईं वेबसन्डेउ प्रयोग गर्न यो सम्भव छैन, त्यसैले तपाईं यसको प्रीमियम संस्करण किन्नु पर्छ। तपाईं यसको परीक्षण संस्करणको साथ १०० वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि सफ्टवेयरले काम गर्न छाड्छ र तपाईंलाई $ २० देखि $ from० सम्म केही तिर्नु पर्छ। संक्षेप मा, WebSundew एक उत्कृष्ट डाटा एक्स्ट्रक्टर र वेब क्रलर हो।